"कस्टुमरको चिट्ठी｜7-Eleven को पार्ट टाइम ・(छोटो समयको /बिहान) पार्ट टाइम ・(लामो समयको) पार्ट टाइमको जानकारी"
मुख्य पेज > पार्ट टाइमको छनौट सम्बन्धि जानकारी > “प्रकाशन” कस्टुमरको चिट्ठी
मैत्री सेवा अतिनै राम्रो भएको 7-Eleven ।
हरेक दिन ,विभिन्न धारणाहरुबाट भएका ग्राहक बाट प्राप्त भएको चिट्ठीको केहि प्रति प्रकासन गरिएको छ ।
टोक्यो निवासी ए भन्ने मान्छे
केहि समय अगाडी ,बिहानी पख यामागुची प्रान्तको .........भन्ने पसलमा गएको थियौं । ओनिगिरि (भातको डल्लो )२ वटा र जुस किनेका थियौं ।त्यो बेला त्यहाँ काम गर्न स्टाफको काम गर्न शैली अत्यन्त राम्रो भेटियो ।
के काममा अल्झिएकोले एक तर्फको क्यासियेर मेसिन बन्द गरेको थियो ।लाइन लागेको मात्र थियों 「पर्खनु परेकोमा क्षमा ,यता आउनुहोस 」भनेर मैले छानेको ओनिगिरिलाई 「यो धेरै मिठो छ ,मलाई पनि यो धेरै मनपर्छ। 」भनि 「साथै अरु सुशी ( जापानिज खाना) पनि धेरै मिठो छ फेरी आउनुहोला 」भनि मनलाई खुसि बनायो ।
यसैबीच कोम्बिनी (२४ घन्टे पसल ) भन्नाले लगभग उस्तै बोलि र सामानको सल्लाह दिने भएपनि प्राकृतिक रुपमा निक्लिएको त्यो बोलि सुनेर धरै खुसि लाग्यो । यसै गरि सम्पूर्ण 7-Eleven का पसलहरुले मन छुने बोलि बचन गरेमा हामी अझै माथि जाने थियौं होला ।
त्यो समयमा सेवागरि पाएको उक्त स्टाफको नाम「.......」भनि नेम कार्ड लेखिएको अझै याद आउछ । राम्रो सर्भिस र काम गरि पाएकोमा अत्यन्त खुसि छु भने आसय बुझाउन आतुर छु ।
ओसाकाबाट बि भन्ने मान्छे
क्यासियेर मेसिनको साइडमा भएको कफी पिउने गर्छु । आजपनि कफी पिउन मन लागि चिसो कफी हाल्ने ग्लास लिएर कफी हाल्न खोज्दा हात चिप्लिएर आइस सबै भुईमा पोखियो। त्यो बेला महिला स्टाफ झट्टै नयाँ ग्लास लिएर आईन अनि अर्को स्टाफले भुई सफा गरिन । अलिकति पनि नरिसाईकन गरेको त्यो सेवाले मान अत्यन्त प्रसन्न भयो । त्यो बेला धन्यवाद भन्न भुलेकाले यो इमेल गरेको छु । धेरै धेरै धन्यवाद !
फेरी पनि आएर पसल प्रयोग गर्न चाहन्छु ।
गिफु प्रान्तबाट सी भन्ने मान्छे
केहि दिन अगाडी ,किचिज्योजी सडकबाट हिगासीहाची सडक तर्फ जाँदाको बेला (7-Eleven पसल ) प्रयोग गरें । पार्किंग पनि फराकिलो भई पस्न सहज, साधारण7-Eleven संगको अन्तरको अनुभव नगरी सर्बप्रथम भित्र गई ट्वाइलेट प्रयोग गर्दा छक्क ! कुना-कन्दरा सम्म अतिनै सुन्दर-सफा र अत्यन्त आरामदायी भई अझै 「 सँधै भरि सफासंग प्रयोग गरि दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद 」भन्ने वाक्य पसल सफा राखेकाले प्रयोगकर्ताहरुको पक्ष पनि आनन्द लिने मात्र नभई, सफासंग प्रयोग गरिदियौं भन्ने भावना जागृत हुन्छ ।
प्रयोग गरेका कोम्बिनी (24 घन्टे पसल )हरु मध्यमा त्यहाँ सम्म सफा स्थान देखेको छैन । अवस्य नै यो स्थल नमुना बनाई7-Eleven आरामदायी छ भन्ने कुरा फैलेको हेर्न चाहन्छु ।
त्यस्तै ,ड्रिप कफीको लागि खाली कप किनेर कफी हाल्न अलमल्ल परेको बेला (कफी हाल्ने सिस्टम थाहा नभएर ) क्यासियरको स्टाफले नरम पुर्वक कफी-मेसिनको स्थान सम्म मार्ग निर्देशन गरि कफी हाल्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराईदिए । कामको थकावट पनि सन्चो भई मिठो कफी पिई फर्कीने बाटो लागें।
धेरै धन्यवाद । अवस्य नै भ्रमण गरि पसलको पुरस्कृत गर्ने जस्ता अवसरहरुको भएको बेलामा प्रशंसापत्र !
होक्काइदोबाट डी भन्ने मान्छे
हप्तामा ३ चोटी जति आउने जाने गर्दै छु ,यो पसलको म्यानेजरको चालचलन अति राम्रो छ । सधैँ हँसिलो ,प्रस्ट बोलि ,नरम भई समान पनि राम्रो संग झोलामा हाली काम छिटो गर्न ,कसैलाई पनि नपर्खाउने बानी छ ।
यो साधारण कुरा हो तर यो गर्न नसक्ने स्टाफ धेरै छन् ।
लगभग लाइनमा बस्दा रिस उठ्ने हुन्छ तर यो मेनेजरको पसलमा लाइनमा बसेपनि पटकै रिस उठ्दैन । मान्छेलाई गर्न मनोभावको बारेमा सिक्न पर्ने कुरा महसुस भयो ।
समान लिएर बाहिर जना लागेको बेला「 ध्यान दिएर जानुहोला !अनि फेरी आउनुहोला!」 भन्ने मिठो बोलि सधैँ ताजा हार्दिक मंगलमय शब्द बनि रहेको छ।अहिले सम्म प्रयोग गरेको 7-Eleven मध्ये सबै भन्दा राम्रो लाग्यो । अत्यन्त राम्रो तहको काम हेरी पुरस्कृत गरु जस्तो लाग्यो ।
फुकुओका प्रान्तबाट एफ भन्ने मान्छे
१०/१६ को दिउसो १७.३० बजे तिर समान खरिद गरि फोहोर फाल्दा बिर्सिएर औषधि र इन्सुरेन्स कार्ड पनि संगै फालेछु । २ घण्टा पछि यादआई पसल
फर्की कुरा गर्दा लगभग २० वर्षको स्टाफले अद्द्यारो अनुहार नपारी फोहोरको झोला ल्याएर ,भित्र सबै हेरी खोजिदिए ।
अन्तिममा समान भेटियो तर खोजिदिने उक्त स्टाफको नाम याद गर्न भुलेछु ।
अवस्यनै म्यानेजरको तालिम पनि धेरै राम्रो होला भन्ने लागेको छ । राम्रो मान्छे लाई पुरस्कृत गर्न अवसर आएमामा अवस्य त्यो पसल को स्टाफ र म्यानेजर लाई दिन चाहन्छु ।धेरै धन्यबाद ।